चन्द्रमामा ८० रोपनी जग्गा किन्ने नेपाली को हुन ? अपत्यारिलो तर वास्तविक ! « Today Khabar
चन्द्रमामा ८० रोपनी जग्गा किन्ने नेपाली को हुन ? अपत्यारिलो तर वास्तविक !
प्रकाशित ६ चैत्र २०७४, मंगलवार १६:१०
काठमाडौं, ६ चैत्र । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले ‘उद्देश्य के लिनु, उडी छुनु चन्द्र एक…’ कविताको अंशलाई सफलतासँग जोडेर उच्चाहरण गरिने गरिन्छ । काठमाडौं मखनका रमेशकुमार जोशीले महाववि देवकोटाको यहि कविताको अंशलाई सार्थक बनाएका छन् । अर्थात उद्देश्य लियो भने सफलता पाउन सकिन्छ भन्ने उनको कामले सिद्ध गरेको छ ।